မမသီရိ: ရွာထဲက အပြန်......
မမသီရိရဲ့ စာတွေ၊ အရေးအသားတွေ အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်၊ သတိတရ၊အမှတ်ရတဲ့ အတွက်လဲ ကျေးဇူးပါ၊ မမသီရိ လိုဖတ်ကောင်းအောင် စာစီ၍မရေးတတ်၊ ရေးတတ်သလိုလေးတွေ ရေးတာကို အသိအမှတ် ပြုတာလဲထပ်ကျေးဇူး:)
ထမင်းစားနေတော့ ဝင်စားမှာစိုးလို့ မခေါ်တာလေ..:P
အားလုံး မျှော်လင့်ထားတဲ့ ကောင်းသောနေ့လေး အမြန်ရောက်ပါစေဗျာ...
Friday, February 20, 2009 10:02:00 PM
ဟေးလ်..... ဟစ်တလာ.... !!!!......း)
အပေါ်က.. နှုတ်ဆက်နည်းကိုတွေ့လို့ သတိရသွားတယ်။
စောစံဘိုးသင် ပြောတဲ့ သူ့အကြောင်းထဲမှာ ပါ။ သူ ဂျာမဏီရောက်တော့.. ဟစ်တလာ ရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုးအရှိန် အတက်ဆုံး အချိန်ဖြစ်နေသတဲ့။ အားလုံးက..တွေ့တာနဲ့ -- ဟိုင်း- ဟစ်တလာ- ဆိုတာပဲ..ပြောနေကြရတော့... နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့.. လေသံ ရော့လာပြီး.. ဟိုင်း လား..ဟိုင်း..လား.. ဆိုပြီး ဖြစ်လာရော တဲ့။း)
ဟိုင်း.. မမသီရိ- ကျမနံမယ် ထဲ့ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားတာ ကျေးဇူးပါ။ ဒါပေမဲ့..နိုင်ငံကျော် စာရေးဆရာမ တော့..မဟုတ်ပါ။း)
လျှောက်လည်တတ်တဲ့ အကျင့်လေးက တူနေပြန်ပြီ။
လာလာပြီး လည်တဲ့ အတွက်
အပြုံး လက်ဆောင်တွေ ချန်ထားတတ်တဲ့
Saturday, February 21, 2009 12:49:00 AM
မမရဲ့ အကို က စိတ်ကြီးတယ် ဟုတ်လား.. အင်း ထင်သားပဲ.. ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ.. ဟိုးအရင်က များ သိခဲ့ကြဖူးလားလို့ တွေးနေတယ်။ :)
Saturday, February 21, 2009 1:12:00 AM
မမ ပို့စ်လေးက စာဖတ်သူကို ဖတ်နေရင်း ဖမ်းစားသွားတယ် ပထမ ဖတ်နေတုန်း ငယ်ငယ်တုန်းက ရွာက အကြောင်းလေးထင်နေတာ နောက်တော့ အန်ကယ် လိုက်ပို့ပေးရင်ဆိုတော့ ..ဟင်းး အစ်မက ယူအက်စ်ကပဲကို ပြောလည်းမပြောပြဘူး ထင်ပြန်။ နောက်တော့ သံတမန်တွေနဲ့ လေ့လားရေးခရီး အယ် မြန်မာကို ပြန်ရောက်သွားပြန်ပြီး ကမ္ဘာများပတ်နေသလား ဟုတ်သေးပါဘူး ဟစ်တလာတွေကော ရှုပ်နေတာပဲ နောက်မှ...သြော် နောက်ဆုံးတော့ ဂလိုကိုး ဘလော့ရွာကိုပြောတာပဲး) စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ် ရွာလေးက ပျော်စရာကောင်းပါတယ် လမ်းမှာတွေ့တဲ့သူတွေထဲပါလို့ ပျော်တယ် ။ခဲခြစ်လေးဆွဲပေးမယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ရွာထဲမှာ ဆက်လက်ပျော်ရွှင်ပါစေ အစ်မရေ့ အားပေးလျှက်
ကဗျာတင်မဟုတ်ပဲ စာတွေပါအရေးအသားကောင်းလှတဲ့ ရွာသာယာလေးထဲက မသီရိရဲ့အိမ်ပေါ့...ကျနော်ရောက်တာနောက်ကျ ခရီးထွက်နေရလို့ပါလို့ တောင်းပန်ချင်..အားတဲ့အခါ ခဲခြစ်ပန်းချီဆွဲပေးဦးမယ်ဆိုလို့လည်း ကျေးဇူးတင်မဆုံးခဲ့...
ရွာထဲလျှောက်လည်တာ မမသီရိတော့ ဘယ်လိုနေလဲမသိ။ ကျွန်တော်တော့ လိုက်ဖတ်ရင်း ခြေထောက်တွေတောင်ညောင်း.. အဲလေ မျက်စိတွေတောင် ညောင်းသွားတယ်။ :P
လျှောက်လဲလျှောက်နိုင်တဲ့ မမသီရိပါပဲ။ အဟတ်.. နောက်တာပါနော်.. တကယ်ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ် ကြုံသမျှ ဘုံဘ၀မှာပေါ့နော်။ အတွေ့အကြုံတွေ စိတ်ကူးလေးတွေ မျှဝေခံစားသွားပါတယ်။ အင်း.. ခဲခြစ်ပန်းချီဆို ကျွန်တော်လည်း စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဆွဲပေးပါလားဗျာ။ ကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်ပါတယ်။ :P
ရွာထဲလျှောက်လည်ရတာ ခြေထောက်ညောင်းသွား ပြီလား မမ။ ဟိ ဟိ မမက မေ့သမီး အမေ့ကိုအချွဲသန် တယ်ဆိုတာ သိနေတယ်ပေါ့။ နည်းနည်းလေးပါ။ :P မွေးနေ့ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးနော်မမ။
Monday, February 23, 2009 8:12:00 PM
နိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာမ ဆိုလို့ မျက်လုံးပြူးသွားတယ် မမိုးချိုသင်းကို ပြောရင်း ရောသွားတာနေမှာပါ :)
အလုပ်တွေများတဲ့အခါ ခြေရာမချန်မိ ဖြစ်တတ်တယ်။ အမြဲလာလည်လို့ ကျေးဇူးတင်လျက်ပါ မမသီရိ။
စာတွေအများကြီး ဆက်ရေးပါ။ အားပေးလျက်.။
မမ ပုံဆွဲပေးမယ်လို့ ကွန်မန့်လာရေးတဲ့နေ့ကတည်းက ဒီဘလော့ဂ်ကို ၀င်ဖို့ ကြိုးစားနေတာပါ။ လုံးဝ ၀င်မရတာ ဒီနေ့မှ အောင်မြင်တယ်။
လာဖတ်တော့မှ အံ့သြမိတယ်။ နိုင်ငံကျော် စာရေးဆရာမကြီး မဟုတ်ရပါဘူး။ ကိုယ်ခံစားရတာတွေ တောင်ခြစ် မြောက်ခြစ် ခြစ်နေတဲ့ ဘလော့ဂါလေးပါ မမရာ။ ပုံဆွဲပေးမယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူး အထူးပါ။ (ပုံတွေ ထပ်ပို့ပေးရအုံးမလားငှင် အဟီး..)
၀ါးလုံးရှည်နဲ့တော့ သိမ်းပြီး မပြောသင့်တာ မှန်ပါတယ်။ တချို့ကျတော့လဲ ဟစ်တလာ ဟစ်တလာ ဆိုပြီး တသွေးတသံတမိန့်အောက်မှာ လုပ်ရတယ်ဆိုပြီး ရောင်ပြန်လွှတ်တာမျိုးလဲ ရှိသေးတာ မမရေ..
(ဒါနဲ့ မမက AK 47 အာကိုဂျီးနဲ့ တကယ့် မောင်နှမ အရင်းလား..)
ရေးထားတာအစုံအပြင် ပို့စ်အရှည်ကြီးကို အစအဆုံးဖတ်ဖြစ်အောင် ရေးနိုင်ပါပေတယ် အစ်မရေ ..
Thursday, March 05, 2009 5:28:00 PM